▷ Amazon Prime Day ee mashiinnada harqaanka: heshiisyada ugu fiican
Maalinta Prime 2022 ee mashiinada harqaanka
Haysashada mashiinka dharka lagu tolo guriga waa mid ka mid ah fikradaha ugu fiican ee aan haysan karno. Mar haddii iyaga loo mahadceliyo waxaan mar walba samayn karnaa taabashada ugu fiican gurigeena ama samayn karnaa moodadayada. Waxaa jira faa'iidooyin badan oo sababtaas awgeed, kama gudbi karno fursadda aan ku qabsan karno hal mahadsanid Maalinta Maalinta.
Haa, waa mid ka mid ah dhacdooyinka iyo daqiiqadaha ugu waaweyn sanadka. Gudaha, waxaan ka iibsan karnaa mashiinada dharka lagu tolo qiimaha riyada. Waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato inaad rumaysato, laakiin halkan waxaan ku siin doonaa dhammaan macluumaadka si aad u awooddo inaad ku hesho mashiinka riyadaada iyo lacag aad u yar. Sidoo kale ma doonaysaa inaad hesho?
Maalinta Ra'iisul-wasaaraha ayaa dhawaan bilaabanaysa. Dib ugu noqo halkan Julaay 12 si aad u ogaato qiima dhimista mishiinada tolida ee ugu wanaagsan xubnaha Amazon Prime
Mashiinnada harqaanka maalinta Prime Minister 2022
Waa maxay mashiinada harqaanka ee laga iibsan karo iibka maalinta Prime Day
Shirkad leh kuwa badan oo gadaasheeda ah, kama dhici karto Maalinta Koowaad. Sababtan awgeed, waxaan dooneynaa inaan helno labada nooc ee kala duwan ee mashiinnada tolida ee Singer iyo qalabkooda, kuwaas oo aan waligood dhibeynin in la eego iyaga.
Mashiinnada dharka Alfa ayaa sidoo kale ku jira Amazon. Waqtigan xaadirka ah waxay horey u leeyihiin qiimo dhimis wanaagsan, laakiin ma jiraan wax la mid ah sugitaanka dhowr maalmood oo dheeraad ah si ay u helaan dheelitirnaan dhab ah. Laga soo bilaabo mishiinada leh 9 tol ilaa kuwa ugu dhamaystiran oo ka badan 100. Midkee ayaa leh?
Walaal JX17FE (Fantasy...
Tan iyo dhamaadkii 90-meeyadii, shirkadani waxay soo gashay Spain. Inkasta oo ay ka danbeyso taariikh dheer, in ka badan 100 sano. Runtii qiimaheeda tartanka ayaa ka dhigaya xafiiltan kale oo weyn. Dhammaystiryo kala duwan, tolmo iyo qalabyo kala duwan, waxay noqon kartaa doorashadaada ugu fiican markaad sharadayso Maalinta Prime. Kee baad door bidaysaa?
Waa maxay maalinta koowaad
Waxa loogu yeero Maalinta Ra’iisul Wasaaraha waa a dhacdo loogu talagalay dhammaan macaamiisha Premium Amazon. Laakiin maaha oo kaliya inay ka dhacdo meel gaar ah ama waddan, laakiin waxay noqon doontaa adduunka oo dhan. Maalintaas gaarka ah, dhammaan alaabooyinka waxay ku jiri doonaan qiimo jaban. Markaa waa marka aan iibsan karno mashiinnada dharka lagu tolo.
Haddii aad runtii rabto inaad wax badbaadiso, waa inaadan seegin, sababtoo ah sidaan sheegnay, waxaad arki doontaa qiimo dhimisyo kaa tagi doona hadalla'aan. Laakiin haa, waa qaar heshiisyo toos ah sida aan had iyo jeer ku aragno Amazon. Tani waxay noo sheegaysaa inay tahay inaan aad u feejiganno oo aan u degdegno si aan awood ugu yeelanno inaan qabsanno. Markaa haddii aad maskaxda ku hayso alaab, sida kiiskan oo kale waa mashiinnada dharka, ha ka labalabeyn laba jeer.
Goorma ayaa la xusayaa maalinta koowaad ee 2022?
El Maalinta Koowaad ee 2022 waxay dhici doontaa Julaay 12 iyo Luulyo 13. Waa maalintii la ballamay in lagu soo dhaweeyo munaasabadda ugu muhiimsan sanadka. Sababtoo ah dhiirigelintan oo kale waxay ahayd waxa aan runtii u baahanahay. Inkasta oo aan hore u haysanay taariikhda, waa in aan xasuusannaa in qaar ka mid ah dalabyada la kordhin karo dhowr saacadood oo dheeraad ah. Maadaama wakhtiga saxda ahi uu u dhexeeyo 00:00 13-ka oo uu dhamaan doono ka hor inta aanu gambaleelka garaacin mar kale 00:00 21-ka. Laakiin xusuusnow marka aad xiisaynayso maqaal gaar ah, waa inaad dardar gelisaa xawaaraha, maadaama ay jiri doonto noqo baahi badan.
Waa maxay sababta ay fursad wanaagsan u tahay inaad soo iibsato mashiinka dharka lagu tolo maalinta Prime Day
Laga bilaabo subaxdii, laga bilaabo maalintaas 12 bisha Luuliyo iyo shantii daqiiqoba mar, wax-soo-saarka ayaa loo cusboonaysiin doonaa waxyar. Tani waxay mar hore naga reebaysaa tilmaan ku saabsan sida ugu dhakhsaha badan ee hawsha oo dhan u socon karto. Marka aan rabno alaab gaar ah sida mashiinka tolida, waa inaan u fiirsnaa oo aan qaadnaa tillaabada.
Waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican ee lagu iibsan karo sababtoo ah, inkastoo aynaan garanayn sida saxda ah ee qiimo dhimista aan yeelan doono, waxay yihiin qiimaha kama dambaysta ah oo aad u hooseeya. Iyadoo la tixgelinayo in mishiinnada tolida ay noqon karaan ilaa 100 euro kuwa ugu jaban iyo in ka badan 600 kuwa dhamaystiran, waxaan awoodi doonaa inaan bixinno ku dhawaad ​​kala badh iyaga. Markaa, si kasta oo aad u eegto, dhammaan waa kayd, taasina waa waxa aan u baahanahay.
Faa'iidooyinka iibsashada mashiinka dharka ee Amazon Prime Day
Faa'iidada ugu weyn ee iibsashada mashiinka dharka inta lagu jiro maalinta Prime Day waa qiimaha. Kuwani waa laba maalmood oo dalabyo ah oo la mid ah kuwa aan ka heli karno waqtiyo kale sida Black Friday, markaa shaki la'aan waa munaasabad mudan in laga faa'iidaysto si loo badbaadiyo inta ugu badan ee suurtogalka ah.
Faa'iido kale oo ay bixiso Prime Day ayaa ah inaad haysato dammaanadda Amazon iyo adeegga iibka ka dib, wax aad u adag in la barbardhigo oo na siinaya xasillooni badan oo maskaxda ah tan iyo, haddii ay dhacdo dhibaato kasta, waxaan ognahay inay ka jawaabi doonaan. sida ay tahay iyo wax dhib ah ma jiri doonto xitaa in dib loo soo celiyo lacagta.
Sida aad arki karto, labadan sababood ayaa sabab u ah inaadan aad uga fikirin arrintan oo aad ka hesho mashiinka dharka lagu tolo ee jaban ee noocyada caanka ah sida Alfa ama Singer, si aan u magacaabo dhowr.
Mashiinka dharka » Maalinta Prime 2022 ee mashiinada harqaanka